Home News Cabsi Amni oo kenya lagasoo warinaayo
Cabsi Amni oo kenya lagasoo warinaayo
Sida laga soo xigtay saraakiisha ammaanka ee dalka Kenya dowladda Kenya waxa ay si weyn u adkeysay ammaanka qaar ka mid ah magaalooyinka dalka Kenya.
Ilaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa sheegaya in ay jirto cabsi xoogan oo ku aadan in ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadan dalka Kenya, xilliyadda dadka aan Muslimiinta aheyn ay u dabaaldegayaan Ciida Kirismiska.
Gudoomiyaha degmada Mandera ayaa sheegay in ay Al-Shabaab doonaayaan in ay weeraraan xarumaha muhiimka ah ee dalka Kenya , gaar ahaan degmada Mandera.
Saraakiisha Ciidamada Ammaanka dalka Kenya ayaa lagu amray in ay suggaan Ammaanka Goobaha ay ku sugan yihiin dadka aan Muslimiinta aheyn, maadaama ay sheegeen in ay heleen xog ku aadan weeraro ay qorsheynayaan Al-Shabaab.
Saraakiisha ammaanka dalka Kenya ayaa sheegay in ay adkeen doonaan ammaanka magaalooyinka Mandera iyo Garissa.
Previous articleDowlada oo looga digay in ay abuurto dhibaato ka daran Al-shabaab
Next articleDigniin loo jeediyay Musharaxiinta Maamulka Puntland
Abaanduulaha CXDS Gen Caanood oo ay is xigaan Farmaajo oo Madaxtooyada...
Madaxa Xukumada Galmudug oo Maanta Furay Shir Loga Hadlaayo Amaanka Deegaanada...